Mpanamboatra sy mpamatsy an-tsokosoko an'i China China Side View Mirror PK9780 | Tetezana Andrefana
PK9780 dia mety amin'ny ISUZU NKP NHR andiany. Ny vokatra izay ataonay dia tena mandaitra sy antoka kalitao. Tianay koa ny mahazo ny fitokisanao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fandefasana ny kaontinao aminao araka izany. ny orinasanay dia natokana hanana serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra ary misy vokatra azonao.
PK9780 dia mety amin'ny ISUZU NKP NHR andiany. Ny vokatra izay ataonay dia tena mandaitra sy antoka kalitao. Tianay koa ny mahazo ny fitokisanao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fandefasana ny kaontinao aminao araka izany. Ny orinasanay dia natokana hanana ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra ary misy ho anao ny vokatra. Tao anatin'izay taona lasa izay, manangana ny kolontsainay koa izahay, ny orinasa dia entin'ny teboka mazava momba ny lanja sy ny fahitana eo amin'ny orinasa. Manantena ny fiheveranao tsara sy lava izahay. -Ny orinasa manerantany dia ataontsika tsara sy maharitra amin'ny mpanjifanay ny vokatra rehetra. miaraka amin'ny fampandrosoana 10 taona mahery, lasa mpamatsy entana sy mpivarotra ambongadin'ny kamio iray manontolo izahay sy ireo kojakoja fitehirizan'ny SINOTRUK HOWO, STEYR, STEYR KING, PRINCE GOLDEN sns, ary afaka manolotra servisy feno sy ny consultation technique izahay. amin'ity fitsipika ity dia mpanjifa maro no lasa mpanjifantsika mahatoky hatramin'ny taranaka fara mandimby. Manasa anao hiditra amin'ny fianakavianay izahay.
FAMPIHARANA ISUZU NKP NHR andiany
Teo aloha: Taratry ny fitaratra ho an'ny kamio PK9583
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9440